बाराही सहकारीको मुनाफा ५४ लाख
पोखरा १७, बिरौटामा रहेको बाराही बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडले आर्थिक बर्ष २०७५-०७६ मा ५४ लाख ६६ हजार ४ सय ७० रुपैया मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको छ । संस्थाको हालै पोखरामा सम्पन्न भएको २० औं साधारण सभामा कोषाध्यक्ष क्षेत्रकुमार श्रेष्ठले अघिल्लो बर्षको तुलनामा यस बर्ष ५६ प्रतिशतले संचालन मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताए ।
संस्थाले आर्थिक बर्ष २०७४-०७५ मा ३४ लाख ९८ हजार ८ सय ८१ रुपैया मुनाफा आर्जन गर्न सफल भएको थियो । संस्थाले आ.व. २०७५-०७६ मा २० करोड ३४ लाख ६६ हजार रुपैया कुल कर्जा लगानी गरेकोमा कर्जा असुली भने २० करोड ४१ लाख ५ हजार ३ सय ८४ रुपैया गर्न सफल भएको छ । त्यसै गरी संस्थाले आ.व. २०७५-०७६ मा २४ करोड ८८ लाख ८४ हजार ७ सय ८६ रुपैया निक्षेप गर्न सफल भएको छ । संस्थाले २३ करोड ९० लाख ७६ हजार ९ सय ८ रुपैया निक्षेप भुक्तानि गर्न सफल भएको छ । संस्थाको शेयर पुँजी आ.व. २०७५-०७६ मा ६ करोड २४ लाख ६३ हजार रहेको छ भने अघिल्लो बर्ष ६ करोड १३ लाख २३ हजार ९ सय रुपैया शेयर पूंजि रहेको कोषाध्यक्ष श्रेष्ठले बताए । २०५६ सालमा ५२ जना शेयर सदस्यबाट सुरु भएको उक्त संस्थामा हाल ७ सय २६ जना पुगेको संस्थाका सचिव एकदेव बरालले बताए । यसैबिच, महेन्द्र कुमार श्रेष्ठको अध्यक्षतामा नयाँ कार्यसमिति चयन भएको छ ।